ဝေးသှားပွီးမှ ပွနျလိုခငျြနလေို့မရဘူး – Shinyoon
လမျးခှဲမယျလို့ ဆုံးဖွတျပွီးရငျ နောကျပွနျလှညျ့မကွညျ့နဲ့တော့ . . . နာကငျြလှနျးလို့ ကြှနျမ ငိုကောငျး ငိုနိုငျပါတယျ ကိုယျ့ကိုကိုယျအပွဈတငျရငျးလဲ ဒေါသထှကျကောငျးထှကျနနေိုငျတယျ အခြိနျတှေ ဖွုနျးခဲ့မိလို့ နောငျတတှေ ရနတောလဲ ဖွဈကောငျးဖွဈခငျြဖွဈမယျ
ဘာပဲ ဖွဈဖွဈပါ လမျးခှဲမယျလို့ ဆုံးဖွတျပွီးသှားရငျ နောကျပွနျလုံးဝ ငဲ့မကွညျ့နဲ့ ကြှနျမ သခေငျြသသှေားပါစေ လုံးဝနောကျပွနျလှညျ့မလာနဲ့ကြှနျမဆိုတာ အသနားခံ သတ်တဝါတဈကောငျ မဟုတျဘူး
မိနျးကလေးတဈယောကျမှာ မာနဆိုတာရှိတယျ သိပျခဈြမိတဲ့အခါ အဲ့ဒီမာနတှကေ မရှိသလောကျဖွဈနပေမေယျ့ သိပျမုနျးမိသှားတဲ့ အဲ့ဒီမရှိတဲ့မာနတှကေပဲ မိုးထိုးတဲ့အထိ ဖွဈသှားတတျတယျ ဒါသဘာဝပါ
သိပျခဈြလှနျးလို့ နှလုံးသားက တောငျ့တနရေငျတောငျ ဦးဏှောကျက ဘယျလိုနညျးနဲ့မှ လကျသငျ့ခံတော့မှာ မဟုတျဘူး တိုကျဆိုငျမှုတှရှေိလာလို့ သတိရခငျြတဲ့အခါ ရမယျ ဒါပမေယျ့ ပွနျလိုခငျြတာမြိုးမဟုတျဘူး ဘယျလောကျပဲ ခဈြခဈြပါ ကိုယျ့ကို မလိုခငျြတော့တဲ့လူမြိုးတဈယောကျကို ပွနျပွီးလကျသငျ့ခံဖို့ဆိုတာ ဘယျလိုရှုထောငျ့ကပဲ ကွညျ့ကွညျ့ ဘယျနညျးနဲ့မှ မဖွဈနိုငျတဲ့အရာလေ
ဒါကွောငျ့ လမျးခှဲခငျြပါတယျဆိုရငျတောငျ ကွညျကွညျဖွူဖွူပါပဲ ဆှဲထားမယျ့ မိနျးမထဲ ကြှနျမ မပါဘူး ဒါပမေယျ့ လမျးခှဲပွီးသှားရငျ ပွနျလဲ ငဲ့မကွညျ့နဲ့ ပွနျပွီးတော့လဲ လှညျ့မလာနဲ့ သလေူဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အဓိပ်ပါယျကောငျးကောငျးနားလညျရဲ့လား သူ အသကျရှငျနသေညျဖွဈစေ ကိုယျ့စိတျထဲမှာ သသှေားပွီလို့ မှတျလိုကျရငျ အဲ့လူက သလေူပဲ
ဘာမှ ထူးထူးခွားခွားပွောငျးလဲသှားဖို့ မမွငျတော့ဘူး ဘ၀ခငျြးခွားသှားတာလလေို့ ဖွသေိမျ့ပဈလိုကျဖို့ ပိုပွီးလှယျကူသှားတယျ မိနျးကလေးဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ နားလညျဖို့လဲ ခကျတယျလေ တဈခါတဈရံ အရမျးကို လှမျးလိုကျတာလို့ ပွောခငျြပွောနလေိမျ့မယျ ဒါပမေယျ့ ပွနျလိုခငျြလားဆိုရငျတော့ Noပါ လမျးခှဲပွီးသှားရငျတော့ ဘယျတော့မှ ပွနျလှညျ့မလာပါနဲ့ ။
လမ်းခွဲမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် နောက်ပြန်လှည့်မကြည့်နဲ့တော့ . . . နာကျင်လွန်းလို့ ကျွန်မ ငိုကောင်း ငိုနိုင်ပါတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပြစ်တင်ရင်းလဲ ဒေါသထွက်ကောင်းထွက်နေနိုင်တယ် အချိန်တွေ ဖြုန်းခဲ့မိလို့ နောင်တတွေ ရနေတာလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ လမ်းခွဲမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားရင် နောက်ပြန်လုံးဝ ငဲ့မကြည့်နဲ့ ကျွန်မ သေချင်သေသွားပါစေ လုံးဝနောက်ပြန်လှည့်မလာနဲ့ကျွန်မဆိုတာ အသနားခံ သတ္တဝါတစ်ကောင် မဟုတ်ဘူး
မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာ မာနဆိုတာရှိတယ် သိပ်ချစ်မိတဲ့အခါ အဲ့ဒီမာနတွေက မရှိသလောက်ဖြစ်နေပေမယ့် သိပ်မုန်းမိသွားတဲ့ အဲ့ဒီမရှိတဲ့မာနတွေကပဲ မိုးထိုးတဲ့အထိ ဖြစ်သွားတတ်တယ် ဒါသဘာဝပါ
သိပ်ချစ်လွန်းလို့ နှလုံးသားက တောင့်တနေရင်တောင် ဦးဏှောက်က ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ လက်သင့်ခံတော့မှာ မဟုတ်ဘူး တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိလာလို့ သတိရချင်တဲ့အခါ ရမယ် ဒါပေမယ့် ပြန်လိုချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ချစ်ပါ ကိုယ့်ကို မလိုချင်တော့တဲ့လူမျိုးတစ်ယောက်ကို ပြန်ပြီးလက်သင့်ခံဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုရှုထောင့်ကပဲ ကြည့်ကြည့် ဘယ်နည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလေ
ဒါကြောင့် လမ်းခွဲချင်ပါတယ်ဆိုရင်တောင် ကြည်ကြည်ဖြူဖြူပါပဲ ဆွဲထားမယ့် မိန်းမထဲ ကျွန်မ မပါဘူး ဒါပေမယ့် လမ်းခွဲပြီးသွားရင် ပြန်လဲ ငဲ့မကြည့်နဲ့ ပြန်ပြီးတော့လဲ လှည့်မလာနဲ့ သေလူဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အဓိပ္ပါယ်ကောင်းကောင်းနားလည်ရဲ့လား သူ အသက်ရှင်နေသည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ သေသွားပြီလို့ မှတ်လိုက်ရင် အဲ့လူက သေလူပဲ
ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားဖို့ မမြင်တော့ဘူး ဘ၀ချင်းခြားသွားတာလေလို့ ဖြေသိမ့်ပစ်လိုက်ဖို့ ပိုပြီးလွယ်ကူသွားတယ် မိန်းကလေးဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ နားလည်ဖို့လဲ ခက်တယ်လေ တစ်ခါတစ်ရံ အရမ်းကို လွမ်းလိုက်တာလို့ ပြောချင်ပြောနေလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် ပြန်လိုချင်လားဆိုရင်တော့ Noပါ လမ်းခွဲပြီးသွားရင်တော့ ဘယ်တော့မှ ပြန်လှည့်မလာပါနဲ့ ။